नेपालमै एसेम्बल हुने टीभीएस बाइक, तर मूल्य भने उस्तै ! - Laltin Media
Home»ट्रेण्डिंग»नेपालमै एसेम्बल हुने टीभीएस बाइक, तर मूल्य भने उस्तै !
नेपालमै एसेम्बल हुने टीभीएस बाइक, तर मूल्य भने उस्तै !
टीभीएस बाइकको औपचारिक रुपमा नेपालमै एसेम्बल प्रारम्भ भएको १ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालमा पहिलो चरणमा अपाचे १६० सिरिजको बाइक एसेम्बल भएको कुरा टीभीएस बाइकको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले जनाएको छ ।
यो भन्दा पहिले बजाज बाइक समेत नेपालमै एसेम्बल हुँदै आएका छन् । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी अन्ना लिफानले समेत एसेम्बल गरेर बाइक बिक्री थालेको थियो । तर प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर सो बाइक नै अहिले उत्पादन हुन बन्द भएको छ ।
तर मूल्य भने उस्तै ! नेपालमै एसेम्बल हुने टीभीएस बाइक